16 Dhaawac ah Labo Tareen Rakaab ah ee Hindiya | RayHaber | raillynews
HomeDUNIDAAasiya91 Hindiya16 Dhaawacmay Labo Rakaab Oo Tareenka Ku Dhintay India
13 / 11 / 2019 91 Hindiya, Aasiya, DUNIDA, tareenka, GUUD, Headline, VIDEO
laba rakaab ah oo xamuul qaada oo gudaha India ah
Laba Burbur tareen oo rakaab ah oo ka dhacay India 16 Dhaawac ah; Hindiya gudaheeda, tareenka rakaabka ayaa buriyay oo ku dhacay tareen kale oo rakaab ah. Dadka 16 ayaa ku dhaawacmay shil tareen oo ka dhacay Hyderabad.
Shilka ayaa ka dhacay agagaarka Xarunta Tareenka ee Kacheguda ee Hyderabad, Telangana. Dadka 16 ayaa ku dhaawacmay sida tareenka rakaabka ahaa uu u dhacay oo ku dhacay tareen kale oo rakaab ah. Isku dhacii ka dhashay shilkii darawalka tareenka ku dhacay qaybta darawalka ayaa ku dhegan oo aad u dhaawacmay. Mas'uuliyiinta u soo gudbiyey dhaawacyadii isbitaalka, ayaa sheegay in xaaladda farsamayaqaannada ay culusyihiin.
Sababta shilka wali lama faahfaahin.
Minibus Rakaab ah ayaa lagu tuuray taraam ku yaalla Kony 3 Injured
Gawaarida xamuulka qaada ee Island Express oo la burburiyay 3 (Video - Photo Gallery)
Tareenka xamuulka qaada ayaa ku burburtay Karabuk, 2 dhaawacmay
Tareenka 2 ayaa ku dhacay Tarsus! Mechanic yar oo dhaawac ah
Gaadiidka Gaadiidka Kumbuyuutarka waxaa lagu xakumay tareenka xamuulka! 3 Injured
Tareenka xamuulka ah ee Konya ayaa lagu jiiday baabuur! 2 Injured
1 Dhaawacey Tareenka Caadiga ah ee Titanic ee Kutahya
2 Mechanic Mucaawin yar oo Dhaawac ah Laba Tareen ee Malatya
Tareenka rakaabka ee İzmir ayaa ku dhacay qalab dhismo
Laba Tareen Rakaab ayaa la Arkay
Laba tareen oo rakaab ah ayaa ku dhacay India
Saldhigga Tareenka ee Kacheguda